Nguva yekuverenga: 3 maminitsi(Last Updated On: 27/03/2020)
All of nzvimbo dzokuona dzakanaka kunoonekwa kuburikidza Express 'rupo mieltä mahwindo ose mufambi motokari. Rwendo kuchizoguma pa Bernina Pass. pa 7,000 tsoka pamusoro pegungwa, kuti vanopfuura asingatani kwehasha snowstorms. Zvichakadaro, jeka Italy yakakumirira pane mumwe mugumo rwendo urwu. This yevedza chitima tasva zvinofanira kuva mutemo unoti ose njanji anoda kuti bhakiti mazita.
Zvichakadaro, kubatana Express pamusoro pamazita ndiye db kana Deutsche rautateiden. Germany National chitima Network inopa mamwe yevedza anokwira pedyo River Rhine. nzira dzayo achakutora kuburikidza achirova pfungwa Alps uye gomo nokumipata. Semuyenzaniso, yakanakisisa nzira kunzwisisa Europe chakarebesa rwizi riri nomukombiyuta nzira unobatanidza maguta wokuMainz uye Cologne. Izvi nzira anotora iwe kuburikidza zvinyoronyoro zvikomo, Crumbling nematende, uye yakabatana yemizambiringa.
No kungotaura zvinonakidza chitima nzendo kwaizova kwakakwana pasina kusanganisira Trans-Siberian Express. Uyewo sevatsigiri chakarebesa chitima rwendo panyika, ari Trans-Siberian Express richibatanidza Moscow kumadokero Russia kuti mumhenderekedzo yegungwa kuguta Vladivostok muna Eastern Russian. Munziramo, asi njanji matavi kunyika pedyo nyika yakaita China, Mongoriya, uye North Korea. Nzvimbo dzakawanda Western Europe, kusanganisira Amsterdam, vane chitima dzemapurisa kuti chipo anokwira kuti Trans-Siberian panhepfenyuro St. Petersburg, Rashiya. Ndosaka vokuEurope vakawanda vanosarudza kutora chitima kana kupindawo namo mabvazuva.
Izvi zvinonakidza uye kazhinji-kufuratirwa chimwe chinhu njanji pakufamba. zvechokwadi, hapana akaita vanhu uye zvakaitika uchaita nazvo munzira. Zvigadzirei kusongana mamwe anonakidza vanhu vanobva pasi pose. Hazvinei muchinjikwa-nyika nechitima rwendo uri, zvichida kuti anopedzisira kuwana shamwari kana mbiri pakati vamwe vafambi neusiku uchiri. Ungave uri kutora yevedza Bernina Express, kubvongodza nyika dzinoverengeka pamusoro kana kuti Deutsche rautateiden kana Trans-Siberian Express, kana vakazorora nomusi kuSwitzerland Glacier Express, izvo The Culture Trip anotsanangurwa rwendo vorongerwa ari rainzwika Bernina, kuenda nechitima wakasungwa kuva chimwe chezvinhu zvinonakidza muupenyu hwako.
To get the best train experience in your life, panguva yakachipa pashiri mitengo uye kutorerwa obnoxious Réservation yechikoro, shandisa Save A Train!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/fascinating-train-travel-europe/ - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
I am a private blogger, love trains & famba, if you have spare time i would love if you comment on my posts, because it is important for me to get feedback from my readers, enjoy. - Unogona baya pano ndibate